अस्पतालको डेडिकेटेड फिडर काटियो, उपचार प्रभावित
१८, फागुन चितवन । चितवनका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा जोडिएको डेडिकेटेड फिडर काटिएको छ । यहाँका ११ निजी अस्पताल र दुई मेडिकल कलेजमा विद्युत्भार कटौती नहुने गरी डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् जडान गरिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले डेडिकेटेड फिडर काटेर सिटी फिडरबाट लाइन जोडिदिएपछि उपचार सेवा प्रभावित बनेको छ । वितरण केन्द्रका इञ्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले माथिको आदेशअनुसार डेडिकेटेड फिडर काटिएको बताए…विस्तृत समाचार »
फल एक फाइदा अनेक : केरा
१५ फागुन ,काठमाडौ । केरा तत्काल उर्जा दिने फल हो । ३ ओटा केराले ९० मिनेट सम्म उर्जा दिन्छ । यसले मुटुसम्बन्धी समस्यादेखि मासिक धर्मको अनियमितता, कब्जियत, छाती पोल्ने समस्या र शरीरका अन्य स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानमा औषधीको काम गर्छ । हाम्रो स्वास्थ्यमा भएको अधिकांश कमजोरीबाट बचाइ उर्जा प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ । केराले तत्काल उर्जा दिने भएकाले डाक्टरहरु कमजोरी भएकाहरुलाइ केरा खान सल्लाह दिन्छन…विस्तृत समाचार »
मासु खादैहुनुहुन्छ यि कुराहरुमा ध्यान दिनुस !
पूर्णिमा न्यौपाने,१३,फागुन,काठमाण्डौं । मासु ती प्राणीहरूका र मुख्यतः मांसपेशीहरूलाई भनिन्छ, जसको सेवन भोजनको रूपमा पनि गरिन्छ । मासु शब्दलाई बोलचाल र व्यावसायिक वर्गीकरणको आधारमा पृथ्वीमा रहने पशुहरूको मासुको सन्दर्भमा प्रयोग गरिन्छ । मुख्यत कशेरुकी, स्तनधारी, पक्षी र सरीसृप जलीय मतस्य जीवहरूको मासु माछाको श्रेणीमा जबकि अन्य समुद्री जीव जस्त कि क्रसटेशियन, मोलस्क आदि समुद्री भोजनको श्रेणीमा आउँछन्। त्यस्तै यो वर्गीकरण पूर्णतः लागू हुँदैन । धेरै…विस्तृत समाचार »
ठूलो समस्या स्तन क्यान्सर आफैँ पत्ता लगाउन सिकाइँदै
फागुन,चितवन । नेपालमा दोस्रो ठूलो समस्याका रुपमा देखापरेको स्तनको क्यान्सर समयमै उपचार हुन सके निको हुने चिकित्सकहरुले बताएका छन् । जसका लागि रोग पहिचान आफँैले गर्न सकिने भन्दै यहाँको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले स्तन क्यान्सर पहिचान विधि सिकाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । स्तन क्यान्सरको पहिचान आफ्नो स्तनको आफैँ पहिचान गर्ने सबैभन्दा सजिलो विधि हो भने स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकबाट परीक्षण गराउने, भिडियो एक्स–रेबाट परीक्षण…विस्तृत समाचार »
पिसाव पोल्छ ? त्यासो हो भने यसो गर्नुहोस्
काठमाडौँ । पिसाव खुलेर नआउने वा कम आउनाले पिसाव पोल्ने गर्दछ । बिभिन्न यौनरोग हरुको संक्रमणबाट, कुनै विष वा कडा औषधिका कारण मृगौला वा पिसाव नलि वा पत्थरीका कारण पिसाव पोल्ने गर्दछ । पिसाव पोलेको रोकथामका लागि गरिने केही घरेलु उपायहरु यस प्रकार रहेका छन् : पाकेको आप १ हप्ता सम्म दिनको दुइवटा सेवन गर्नाले धेरै पिसाबका रोगहरु निको हुन्छन् । गाजरको रस साँझ बिहान…विस्तृत समाचार »
लोडसेडिङ्का कारण अस्पतालको अत्यावश्यकीय सेवा बन्द
१०, फागुन काठमाण्डौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता अत्यावश्यकीय संस्थाहरुमा पहिलोपटक तालिका सहित लोडसेडिङ गर्ने सुचना प्रकाशित गरेर लाइन काट्न थालेपछि अस्पतालहरुको अत्यावश्यकीय सेवा प्रभावित हुने भएका छन् । अस्पतालमा हुदै आएको विद्युतको नियमित आपुर्ती सुचना प्रकाशित गरेरै कटौति गरेपछि यसको सिधा असर अस्पताल र अस्पतालले दिने अत्यवश्यकीय सेवामा परेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको अनपेक्षित निर्णयले अस्पतालले दिदै आएको सेवाहरु प्रभावित…विस्तृत समाचार »
मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि ७ सदस्यीय समीति गठन
१० फागुन , काठमाडौ । मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाइ सरकारीकरण गर्ने सम्भावना अध्ययनको लािग ७ सदस्यीय समिती गठन भएको छ । प्रस्तावित मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरकारीकरण गर्ने सम्भावना अध्ययनका मन्त्रीपरिषद्ले फागुन ४ गते १५ दिनभित्र सुझाव बुझाउने गरी समिति गठन गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीको समितिका संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्य सचिव महाशाखाकै उपसचिव रहेका…विस्तृत समाचार »
मिर्गौला तथा मधुमेहसम्बन्धी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण
९,फागुन,पोखरा । ‘सकेसम्म रोग लाग्न नदिउँ, यदि लागिहालेमा बेलैमा उपचार गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ यहाँ मिर्गौला तथा मधुमेहसम्बन्धी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भयो । पोखरा डाइविटिज एण्ड थाइराइड क्लिनिक नयाँबजारले अत्याधुनिक मेसिनसहित ल्याब सेवा शनिबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको अवसरमा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणमा करिब ३०० भन्दा बढीले मधुमेह र मिर्गौलाको परीक्षण गराएका थिए । सो अवसरमा आयोजित सचेतना कार्यक्रममा मिर्गौला तथा पिसाब नली विशेषज्ञ…विस्तृत समाचार »
तनाव लिने बुबाका सन्तान कसरी मधुमेहको सिकार हुन्छन ?
८ फागुन ,काठमाडौ । बाबुआमाको तनावले छोराछोरी रोगी हुन्छन भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । त्यसमा पनि पिताको कारण छोराछोरी रोगी होलान भन्ने सायदैले सोच्लान । तर यहाँ एक अध्ययनले तनाव बढी लिने बुबाको छोराछोरी मधुमेहको सिकार हुने सम्भावना अत्यधिक रहने देखाएको छ । बिशेषज्ञका अनुसार तनावले हर्मोन शुक्राणुमा यस्तो परिवर्तन आउँछकी जसले रक्त सञ्चालन बृद्धि उच्च हुन्छ । वैज्ञानिकका अनुसार बुबाको बंशानुगत कोडका अलावा…विस्तृत समाचार »
गर्भवती महिलाको सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने टिप्सहरु
फागुन,काठमाण्डौं । कुनै पनि सुत्केरी महीलाका लागि गर्भावस्था विशेष अवस्था हो । यस्तो समयमा स्वास्थ्यमा ख्याल गर्न सकिएन भने आमा र बच्चा दुवैको ज्यानै जोखिममा पर्न सक्छ । गर्भावस्थामा खानपिनदेखि विभिन्न अन्य कुराहरुमा स्वास्थ्यलाई विशेष निगरानी गरिन आवश्यक हुन्छ । के हुन त त्यस्तो वेला गर्नुपर्ने सावधानी हरु हेरौ । नियमित रुपमा प्रत्येक २८ देखि ३० दिनमा महिनावारी हुने महिलामा महिनावारीको दशौं दिन देखि अठारौं…विस्तृत समाचार »